माताश्री पलान्चोक भगवतीले सबैको रक्षा गरुन, बुधबार माघ ३/जनवरी १७ को राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल माघ ३ गते बुधबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १७ तारीख माघकृष्ण पक्ष औंसी तिथी प्रातः ०७ः२२ बजे सम्म पश्चात प्रतिपदा चन्द्रमा मकर राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु स्नानदानका लागी औंसी – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
बिद्या ब्यपारको क्षेत्रमा सोचे अनुरुपको समय दिन नसकिएला । मान्यजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यबाट बिषेश लाभ लिन सकिनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरिक हुने अवसर जुट्नेछ । सामुहिक कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ ।
मित्र तथा दाजुभाईको साथ सहयोग प्राप्त रहनाले कार्य सम्पादनमा शाहस बड्नेछ । सामान्य खर्च भएतापनि खर्चको सदुपयोग भएको बोध रहनेछ । पारीबारका कोहि सदस्यको स्वास्थमा देखापरेको समस्या झेल्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
तपाईको बोलिको खराब अशर देखापर्नेछ । साजेदारीकाममा भने मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबशर प्राप्त रहनेछ । सामान्य स्थान्तरणका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण झन्भट ब्यर्होनु पर्नेछ ।
आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । प्रतिस्प्रदामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ ।
श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । तपाईका रोकिएका कार्यहरु पूृनः सुचारु गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ । आटँ शाहसमा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्छ ।
अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ ।
नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । बिभिन्न आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्ने छन । कार्य कुशलताले गर्दा सबै क्षेत्रमा चर्चा चल्नेछ । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोले मन प्रशन्न रहला । आकस्मीक धन लाभको योग रहेको छ ।
पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार २ गते बुधबार (जुन १६) को राशिफल